एमालेको प्रबक्ताबाट किन हटाइयो योगेश भट्टराईलाई ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमालेको प्रबक्ताबाट किन हटाइयो योगेश भट्टराईलाई ?
केपी ओली नेतृत्वको नेकपा(एमाले)ले पार्टी सचिव योगेश भट्टराईको प्रवक्ता पद पनि खोसेको छ । माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नु अघि एमालेमा प्रचार विभाग प्रमुख रहेका भट्टराईले प्रवक्ता समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई नै ब्युताईदिएपछि ओलीले प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदिप ज्ञवालीलाई सुम्पिएका थिए ।
माधव नेपाल समुहका रहेका योगेश भट्टराईसहितका १० जना नेताहरु तेश्रो धारका रुपमा एमालेमै बस्ने निर्णयमा पुगेका थिए । उनीहरुले अघि सारेको १० बुँदे समझदारी अनुसार एमालेलाई २०७५ जेठ २ अघिकै संरचनामा फर्काउने भनिएको थियो । सो मितिमा एमाले संरचना फर्काउँदा भट्टराई प्रचार विभाग प्रमुखसहित प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहन्थे । ओलीको अध्यक्षतामा केहि दिनअघि बसेको बैठकले भट्टराईलाई पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो भने प्रचार विभागमा प्रदिप ज्ञवाली नै रहने निर्णय गरेको थियो ।
तर दार्चुलाका जयसिंह धामीको भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेर हत्या गरेको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्दा भने प्रदिप ज्ञवाली नै प्रवक्ताका रुपमा देखा परेका छन् । उता, ओलीले अध्यक्षलाई नै थाहा नदिई प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए)को भेला बोलाएका छन् ।
ओली आफैं प्रमुख अतिथि रहेको भेलाबारे संगठनका अध्यक्ष अध्यक्ष रुद्रप्रसाद नेपाललाई कुनै जानकारी नै दिईएको छैन् । उनी बरिष्ठ नेता नेपाललाई छाडेर भिम रावलहरुसँगै ओली एमालेमै बसेका थिए । उनले ओली प्रमुख अतिथि बन्ने भेला अवैध रहेको विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् ।